खाना Archives - नागरिक रैबार
बागलुङमा विषाक्त मदिरा पिउँदा चार जनाको मृत्यु, दुई जना गम्भीर बिरामी
गलकोट- विषाक्त मदिरा पिउँदा बागलुङमा चार जनाको मृत्यु भएको छ ।जिल्लाको गलकोट नगरपालिका–७ मल्मस्थित खानेपानी आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरू २१ वर्षीय दीपेन्द्र पुन, ३९ वर्षीय दूधबहादुर राना, ५१ वर्षी रेखबहादुर राना र ३० वर्षीय प्रविन घर्तीको विषाक्त मदिरा पिएर मृत्यु भएको हो । मदिरा पिएर गम्भीर बिरामी ३८ वर्षीय खेमराज घर्ती र २६ वर्षीय रवीन्द्र […]
कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले आतङ्कित भएको बेला रोग लाग्नै नदिने उपायतिर धेरैको ध्यान गएको छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन खानपान, जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगमा जोड दिन आयुर्वेद चिकित्सकहरूको सुझाव छ । यसका लागि जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्न राजधानीको नरदेवीस्थित केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय निर्देशक डा. प्रदीप केसी जोड दिन्छन् । […]
धेरैजसो मानिसहरु राती बाँकी भएको खाना भोलिपल्ट तताएर खाने गर्छन् । तर स्वास्थ्य विज्ञले भने केही बासी खानेकुरा खाँदा तपाईं बिरामी पर्नसक्ने जानकारी दिँदै यस्ता खानेकुरा ताजा नै खान सुझाएका छन् । आउनुहोस्, आज ती खानेकुराबारे जानकारी लिऔं जुन बासी खाँदा तपाईंको स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ । अण्डाः डाक्टर कान्था शेलकेले रिडर्स डाइजेस्टसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘अण्डामा […]
सामान्यता मान्छेले दिनमा कति पटक खान सक्ला ? बढीमा ३–४ पटक । दोलखाको एक सरकारी कार्यालका कर्मचारीले भने दिनमा ८ छाक खाँदा रहेछन् । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका कर्मचारी लक्ष्मी कार्की २०७७ असार ६ गते योजना अनुगमनका लागि एक दिनलाई गाडी भाडामा लिइ जिरी नगरपालिका गएकी थिइन् । त्यही दिन बेलुका फर्किएकी उनले खानाबापत ८ […]
पाँचथर– पाकेर बिक्री गर्ने बेलामा सुन्तला कुहिएर झर्न थालेपछि पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–७ रानीटारका कृषक मर्कामा परेका छन् । सुन्तला टिप्ने समयमा धमाधम झर्न थालेको र झरेको सुन्तला कुहिएको पाइएपछि कृषक चिन्तित बनेका हुन् । सुन्तलाको राम्रो उत्पादन हुने फिदिम–७ रानीटारमा पाकेको सुन्तलाभित्र किरा भेटिने गरेको छ । किराका कारण सुन्तला कुहिएर झरेपछि यहाँका दर्जनौँ कृषक […]
आज साउन १५ अर्थात् खीर खाने दिन। सुदूरपश्चिममा पनि यो दिनलाई विशेष पर्वका रुपमा लिने गरिन्छ। आजको दिन चामल, दूध, नरिवल, छोकडा, मरिच चिनी लगायतका अन्य चिजहरु हालेर खीर बनाउने चलन छ। खीर उच्च क्यालोरी भएको खाना हो। साउनमा खीर खानुकोे वैज्ञानिक महत्व पनि रहेको डाक्टरहरु बताउँछन्। डाक्टरहरुका अनुसार गर्मीको समयमा शरीरमा दाद, खटिरा, र […]
असार अन्तिम साता अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले सप्तरी र सिरहको करिब चार हजार हेक्टर धानबाली डुबानमा परेको छ। रोपाइँ सकिनै लाग्दा शुरु भएको वर्षा र बाढीले सप्तरी र सिरहामा करिब दुईरदुई हजार धानबाली डुबानमा परेको कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजले जनाएको छ। केन्द्रको अध्ययन परीक्षण तथा तथ्याङ्क शाखाका कृषि अर्थविज्ञ किसनदेव राउतले सप्तरी र सिरहामा […]
साउन लाग्दैछ । धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि यो महिना विशेष मानिन्छ । साउनलाई ‘पवित्र महिना’को रुपमा लिने गरिन्छ । त्यही कारण यस अवधिमा शरीरलाई शुद्ध राख्ने, भक्ति-आराधना गर्ने, सात्विक भोजन लिने गरिन्छ । अर्थात साउनमा मासुजन्य वा गरिष्ठ एवं तामासी परिकार त्याग्नु उपयुक्त मानिन्छ । कतिपयले प्याज, लसुन जस्ता खानेकुरा समेत त्याग्ने गर्छन् । साउन […]
युवा नेता ऐरद्वारा अनाथालयमा खाद्य सामग्री सहयोग
राजेन्द्र बिक/२४ बैशाख । नेकपाका युवा नेता तथा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाका स्वकीय सचिव नवराज ऐरले म कंचनपुर महेन्द्रनगर स्थित समाज कल्याण बाल अनाथालयमा खाद्यान्न सामाग्रीहरु सहयोग गर्नुभएको छ। अनाथालयका बालबालिकाका लागि सहयोग स्वरुप १५ कट्टा चामल, १५ केजि दाल, १ पेटि तेल, १ पेटि चाउचाउ र १५ पोका नुन उपलब्ध गराउनुभएको छ । सेवा […]
होलीमा अत्यधिक रक्सी सेवन गर्दा धनुषामा ५ जनाको मृत्यु
जनकपुर । होलीमा अत्यधिक मदिरा पिउँदा धनुषामा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । अत्याधिक रक्सी सेवन गर्दा धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित रमदैयामा ५ जनाएको मृत्यु भएको हो । रक्सी सेवन गरेका ३ जनाको बिहीबार दिउँसो र २ जनाको राति मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक पप्पु नायकले बताए । […]
डिएसपी र इन्सपेक्टरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीका डिएसपी नवराज थापा र इन्सपेक्टर मुरारी मिश्रविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा फेला भएका १२ सय ८४ जनालाई पास गराउन मोटो रकम लिएको पाइएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियार जनाएको छ। ट्रायलमा फेला भएकाहरुलाई पास गरेको, परीक्षा समितिको […]